Imfazwe yasePlataea kwiiMfazwe zasePersi
by I-NS Gill yaMandulo / yeeNkcazo zeGraphic Glossary
Inkcazo: AbaseSartan, amaTegeans nabase-Athene balwa nomkhosi wasePersi owahlala eGrisi, ekugqibeleni kwintlanzi yamaGrike yamaPersi asePersia, i-Battle of Plataea, ngo-479 BC.
UXerxes kunye neenqwelo zakhe zabuyela ePersi, kodwa amaPersi ahlala eGrisi, phantsi kweMardonius. Bema ekulweni kwindawo efanelekileyo abagadi bamabhiza - ithafa. Ngaphantsi kweenkokheli zaseSpartan uPausanias, amaGrike azinqwenela ngokukhawuleza kwinqanaba leMat.
Ekuhambeni kwexesha, uMardonius wazama ukukhupha amaGrike, esebenzisa amahashe akhe. Wahluleka, ngoko amaPersi abuyele. UMardonius watshintsha iqhinga lakhe, esebenzisa amahashe akhe ukuba ahlule amaGrike avela kumalungiselelo abo.
Ekugqibeleni, uPausanias wathatha amabutho akhe waya emathafeni apho ahlala ehlukene khona namaPersi, kodwa kuphela ngodidi lweenduli. AmaGrike akwazi ukunqumla ezinye izinto zasePersi, nazo. Iimfuno zaqhambuka kwaye amaPersi ayetyhefu amanzi aseGrisi. UPausanias wazama ukuhambisa imikhosi yakhe kwenye indawo yamanzi, ngoko ke wathumela amabutho angenalwazi. Isiphumo sokuhlula kwakhe imikhosi yamaGriki kukuba amaPersi acinga ukuba amaGrike aye ahlula ngokwahlukileyo kwezopolitiko. Xa uMardonius, ngoku ngokuzithemba, wahlaselwa, amaqela aseGrike aphuthuma ukuze ancedane aze awanqobe amaPersi.
I-Athene yakhula ngamandla kwaye yaqhubeka iphishekela amaPersi, ngoko nangona i-Battle in Plataea yayiyimfazwe yokugqibela yamaGrike ngokumelene namaPersi emhlabathini waseGrisi, bekungekude kube ngu-449 ukuba iAthene nePersia iphelise ama-Persian War.
, nguPeter Green
Imfazwe yaseSalamis: Ukuhlangana kweNavyal Ukwazi ukugcina iGrisi - kunye neNtshonalanga yeNtlalo, nguBarry Strauss
Simonides - KuLacedaemonian Dead at Plataea
www-adm.pdx.edu/user/sinq/greekciv2/war/perwar2/salamis.htm (iMfazwe yasePlataea)
Iimfazwe zeMfazwe yesiBini sePunic
Inkcazo kunye neMimiselo yeSimboli
I-Galaxy Garden engummangaliso yePaleaku
Funda ngeNkcazo yokuThetha-iNtetho
Ngaba Ndifanele ndizuze iSiqinisekiso soLawulo?
Ukubhikisha kweSemantic yeLizwi Iintsingiselo
Ndidibanisa njani i-Fluorescent okanye i-Neon Colors?
Imfazwe Yehlabathi I: I-Stalemate Ensues
Abahlolokazi Babafelokazi, uGenus Latrodectus
UAnaniyas noSafira - Intetho yeBhayibhile
Indlela yokuhlawula iindleko zobudlelwane okanye u-Sorority
Ukudibanisa isenzi sesiFrentshi esisodwa 'Khetha' ('ukukhetha')
KwiLizwi LaKhe: Iimpawu zabesifazana kwiNcwadi yama-19 yeeNkulungwane
I-Chicago Cubs Yonke ixesha eliQala ukuQala